ခင်လေးငယ် : ˙·••● ရေးခဲ့ဖူးသော Untitled_# များ ●••·˙
˙·••● ရေးခဲ့ဖူးသော Untitled_# များ ●••·˙
■■■■■■■■■ Untitled_1 ::: ★彡
တကယ့်တကယ်တော့ ကိုယ့်စိတ်ခြေနဲ့ ကိုယ်လျှောက်မှ “မဂ္ဂ” ဆိုတဲ့ “လမ်း” ပေါက်တယ်လို့ သိနေပါလျက် သူ ဘာသိဘာသာ ပြုထားခဲ့မိတာ။ ရိုးသားမှုဟာ စကား ခွန်းရေ အနည်းအများထက် မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေပေါ်မှာ အထင်အရှား ကွယ်ဖုံးလို့ မရခဲ့ဘူး။ ယိုယွင်းနေတဲ့ အထိတ်တလန့်ပါးပါးတွေက မျက်အိမ်အတွင်းထောင့်မှာ အရိပ်ကလေးတစ်ခုအဖြစ် လှစ်ကနဲ ဖြတ်အပြေးနဲ့တင် ကြေးမုံပြင်မှာ အထင်အရှား ဟပ်တော့တာ မဟုတ်လား။
အိမ့်အပြင်မှာ တိုက်နေတဲ့ ဆောင်းလေမှာ ဧကရာဇ်ပန်းရနံ့တွေ ပါမနေဘူး။ မှန်တံခါးတွေ စေ့ပိတ်ထားပါလျက် လည်တိုင်ဆီ တစ်ဟုန်ထိုး ဦးတည်ပြီး လာဖျစ်ညှစ်တော့ မယောင်။ ယောင်ယမ်းပြီး ဆတ်ကနဲ မျက်လွှာတစ်ချက် ခတ်လိုက်ဖို့ထက် ခပ်မတ်မတ် ခန္ဓာနဲ့ တအံ့တသြ ရှိနေခဲ့တာ။ ရှတတ ယိုဖိတ်လာမှုက နှလုံးအတွင်း တစ်နေရာကို နင့်ကနဲ ထွေးဆုပ်လိုက် သလိုမျိုး။ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်ကြည် မလဲ့ပါဘဲ သူ့ အတွင်းမှာ ရှိုက်နေတယ်။
သူ့နှလုံးအိမ်အထွာနဲ့သူ အကောင်းဆုံး ပြည့်သိပ်အောင် ရှိခဲ့တာ.. တဲ့။ သူ့ဘာသာ အသံတိတ် ထပ်ကာထပ်ကာ ရွတ်နေတယ်။ အဲ့ဒီညက ရှေးနန်းတွင်းမြို့တော်ကြီး တစ်နေရာမှာ ချစ်သူ့လက်ကို တွဲဆုပ်ထားပါလျက် အမြန်ရထား လက်မှတ်တစ်စောင် ပျောက်လို့ လိုက်ရှာတယ်လို့ ခပ်ဆန်းဆန်း သူ အိပ်မက် မက်ခဲ့သေးပေါ့။ တစ်မျှော်တစ်ခေါ် ပွင့်နေတဲ့ ကြာရေအိုင်ကြီး နံဘေးအရောက်မှာ တစ်ခမ်းတစ်နား ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အဲ့ဒီ ရထားလက်မှတ်ကို သူ ပြန်တွေ့ခဲ့တာ။
ကလေးအရွယ်တည်းက နားရည်ဝနေတဲ့ အရပ်စကားတစ်ခွန်း အပြေးလေး သတိရမိပြန်တယ်။ ဆောင်းမှာမက်တဲ့ အိပ်မက် ကယောက်ကယက် နိုင်မှာပဲပေါ့.. လို့ သူ ဖော့တွေး တွေးလိုက်သေးရဲ့။ သူ့မျက်လွှာအစုံ ဖွင့်ဟလိုက်ချိန်ထိ ညရဲ့ အရိပ်တွေသာ ကြီးစိုးနေသေးတာ။ အိမ့်အပြင်က ဆောင်းလေဟာ ကြမ်းရှရှ နိုင်လွန်းပါလျက် ည-ကို သယ်ယူ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်နှုန်း သိပ်နှေးတာပဲ။
သူကိုယ်တိုင်ဟာ သူ့စိတ်ခြေနဲ့သူ လျှောက်နေပါရဲ့လား..! လို့ အမေးပြုစရာ ဖြစ်တည်လာခဲ့ပြီ။
သေချာတာကတော့ သူ့ မဂ္ဂဟာ ဆောင်းညတစ်နေရာမှာ တစ်ဆစ်ဆစ် တုန်ရီပြီး ဝေ့နေတုန်း..။။
( 2014/ 12/ 09 )
■■■■■■■■■ Untitled_2 ::: ★彡
သူ့အဖို့ အဖြူနဲ့ အမည်းဟာ စက္ခုအာရုံတစ်ခု အတွက်သာ ကွဲပြားတာ-- လို့ ဖွဖွပြောတယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် ပိတ်ခြင်း/ဖွင့်ခြင်း၊ မြှင့်ခြင်း/နှိမ့်ချခြင်း ထိုထို အမည်နာမ တစ်ခုခုရဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက် တိုးလျှိုး ငုံ့ဝင်ချလိုက်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ သူဟာ စိတ်ဝင်စားသူမျိုး မဟုတ်ဘူး။ သူ နေတတ်သလို နေတယ်။ နေချင်သလို နေတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရှိနေတယ်။ သူ့ ခဏတိုင်းဟာ အဲ့ဒါ အကုန်ပဲ။
ဒီအဖြစ် ကိုယ်၌က ဆန်းပြားလွန်းနေတော့တာလား။ ဒါကိုပဲ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဆွဲချထိုးထည့် ကြဦးမှာလား။ တစ်စုံတစ်ရာ လွဲချော်နေသလိုပဲ။ ရယ်စရာ နည်းနည်း ကောင်းပေမယ့် ပြုံးရုံကလွဲလို့ ဘာဖြစ်စရာ သူ့အတွက် လိုအပ်ဦးမှာလဲ-- တဲ့။ သူဟာ ပြုံးရင်းနဲ့ပဲ ဆိုတယ်။
နားလည်ပါ၊ နားလည်ပေးကြပါရယ်လို့ (လက်လေးချောင်း မပြည့်တဲ့ လူသား အချို့ကလွဲလို့) ဘယ်သူ့ကိုမှ သူ တောင်းဆိုလေ့မရှိဘူး။ ခဏတိုင်းမှာ အရှိအတိုင်း သူ နေနေတယ်။ ဟော.. အခုပဲ နှင်းပွင့်တွေ တိုးဖွဖွ သက်ဆင်းလာပြီး လက်ဖဝါးနဲ့ အထိ- အဲ့ဒီ အချိန်လေးမှာပဲ နှင်းဆိုတာ ရှိမနေတော့ဘူး။ အရည်ပျော်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။ ရယ်မောရင်းပဲ သူ့လက်ဖဝါး ဖြန့်ပြခဲ့သေးရဲ့။
ရိုးရှင်းမှု သက်သက်ဟာ စိတ္တဇနာမ် အချို့အတွက် အေးမြခြင်းဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီ ရိုးရှင်းခြင်း အမှုဟာပဲ အခြား စိတ္တဇနာမ်တွေအတွက် ဆန်းပြားနေပြန်ကော။ ညည်းတွားမှု ပြုရင်း ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ဖို့အထိ အားအင်သုံးရမှာ နှမြောစရာ မဟုတ်လား-- လို့ အငြိမ်သား သူပြောတယ်..။
ဘယ်လို အကြောင်းအရာကိုမှ ချီးမြှောက်စရာ မလိုဘူး။ နှိမ်ချ စရာလည်း ရှိမနေဘူး။ ကိုယ်လည်း မလုပ်ဘူး။ (မိမိသဘောအရ) ကိုယ့်ကိုလုပ်ရင်လည်း မကြိုက်ဘူး-- လို့ ခပ်ပြတ်ပြတ် သူ ပြောတယ်။
တကယ်တော့ အရာတိုင်း၊ ဖြစ်အင်တိုင်းမှာ “အင်း..” လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ “ဟင့်အင်း..” ဆိုတာ တစ်ထပ်တည်း လိုက်ပါပြီးသား။ “ဟုတ်တယ်..” လို့ ထောက်ခံရုံလေးနဲ့တင် ”မဟုတ်ဘူး..” ဆိုတဲ့ ကန့်ကွက်မှုက တချိန်တည်းမှာ ထပ်တူပြု ပြီးသားရယ် ရှင့်-- တဲ့။
ဘာဆိုဘာမှ သူ့မှာ ရှိမနေဘူး..။ အဲ့အတိုင်းပဲ သူ နေနေတာ။ သူ့ဆီမှာ ရှိယောင်ဖန်ဆင်းတာဟာ ရှင့်အတွေး၊ ရှင့်အမြင်၊ ရှင့်အထင် သက်သက်ပဲ မဟုတ်လား။ ရှင့်မှာရှိနေတဲ့ အဲ့ဒီအရာတွေကို ရှင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အသိ၊ သတိကလွဲရင် ဘယ်နတ်ဘုရား၊ ဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်ထူးမျိုးကမှ တားဆီးပိတ်ပင်လို့ မရဘူး-- ဆိုတာပဲ။
နှင်းတွေ တစ်ဖွဲဖွဲ ဆက်ကျနေတယ်။ နှင်းမှုန်တွေအောက် ဟိုး အဝေးကို ပုံမှန်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပဲ သူ ဆက်လျှောက်လာခဲ့ လိုက်တယ်။ စကားသံ အချို့တော့ နှင်းပွင့် အဟောင်းတွေထဲ တဖြည်းဖြည်း မှုန်ဝါးပျယ်လွင့် ကျန်ခဲ့ပေမပေါ့..။။
( 2014/ 12/ 16 )
■■■■■■■■■ Untitled_3 ::: ★彡
လောကမှာ ဖြစ်နဲ့ပျက်ကြား ပေါ့ပါးစိတ်နဲ့ ခြေတစ်လှမ်းစာ ငြင်ငြင်သာသာ ခုန်ကူးတတ်ဖို့ သူ့ ဘဝအချိန်တွေ အများကြီးယူပြီး သင်ယူခဲ့ရတာ-- တဲ့။ သူ့နံမည်ပါတဲ့ ဖဲတစ်ချပ်ဟာ ကုလားဖန်ထိုး ကျွမ်းကျင်တဲ့ လက်ချောင်းတွေကြား ရင်တစ်လှပ်လှပ်နဲ့ တိမ်းကပါး ယိမ်းကပါး ရှိခဲ့ဖူးသေးတာပေါ့။
တိုက်နေတဲ့ ဆောင်းလေဟာ သွဲ့သွဲ့ညှင်းညှင်းရှိရင်း နေရောင်နဲ့ သဟဇာတ တင့်နေတာ သူမြင်တယ်။ နေခြည်တိုက်ရိုက် ကျနေတဲ့ ဝရံတာမှာ ထွက်ရပ်နေ နိုင်လောက်အောင် အသာတကြည်ရှိတဲ့ နေ့လေးပဲ။ ကျေးဇူးတင်စိတ်က သူ့ရင်တစ်ခွင်ကို တိတိပပ ပက်ဖျန်းထားတယ်။
ဟိုးအဝေးက မိုးထိတိုက်ကြီးတွေကို ငေးကြည့်ရင်း သူနဲ့ သက်ဆိုင်ဖူးတဲ့ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေအကြောင်း အတွေးရောက်တယ်။ “ငါ” ဆိုတဲ့ နာမ်စားဟာ ပူးတုံခွာတုံ သူ့ထံမှာ ခုထိရှိနေဆဲလို့ ဆင်ခြင်မိပါမှ အကြောက်တရားတစ်စဟာ ခန္ဓာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း တိုးဝင်ဆောင့်လိုက်သလိုမျိုး။ အရာအားလုံးကို အသာတကြည် တိတ်တဆိတ် ပြန်ကြည့်တတ်ဖို့ သူ့မှာ တာဝန်ရှိလာခဲ့ပြီ။
နေထိုင်ရှင်သန်ခြင်း အနှစ်ရသာ စစ်စစ်ဟာ ရုပ်ဝတ္တုတွေအပေါ် မှီတွယ်မနေဘူးလို့ သိမြင်နိုင်တာ နှစ်အချို့တော့ ရှိလာခဲ့ပြီပေါ့။ အလုံးစုံ ကင်းပသွားတဲ့အထိ စွန့်ပစ်တတ်ဖို့ လိုအပ်နေသေးပေမယ့် အထိုက်အလျောက် သူ စွန့်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျေနပ်စရာ ကောင်းတဲ့ အရသာကို ကြည်ကြည်လင်လင်လေး မြည်းစမ်းဖူးပြီး နှစ်သက် တွယ်ငြိသွားသူဟာ သူ ဖြစ်ခဲ့တယ်။
လက်ဖဝါးနှစ်ဘက်ကို ဖြန့်ချရင်း ငုံ့ကြည့်မိတယ်။ ထင်ရှား သိသာနေတဲ့ အရေးအကြောင်း ငယ်လေးတွေဟာ သူ့နေ့ရက်တွေမှာ အရေးပါခဲ့လေသလား။ အေးအေးဆိတ်ဆိတ်နဲ့ ဖွဖွလေး ဖျက်ကြည့်လိုက်တယ်။ တစ်ခဏတာတော့ ပျောက်သွားခဲ့ပြီ။ ဗလာပြင်ဖြစ်နေတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ စိတ်ကူးလေးနဲ့ပဲ လေး၊ ငါးကြောင်း သူ ကောက်ခြစ်လိုက်တယ်။
စိမ့်ကနဲအေးတဲ့ လေတစ်စ သူ့ဆီအပြေးလာကပ်တယ်။ ဆံနွယ်ရှည်တွေ ဖွာကနဲ လွင့်သွားတယ်။ ပြုံးစစ လက်ဝါးပြင်နှစ်ဘက်က သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲ မော့ကာစိုက်ကြည့်လို့။ သူပျော်သွားတယ်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်က မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောလွှာတွေ ပြေလျော့သွားတဲ့ ချမ်းမြေ့ခြင်းမျိုးကို သူ သိပ်ချစ်တာ မဟုတ်လား။ သူ့ မြတ်နိုးခြင်းကို သူပြန်သိရင်း ကြည်နူးမှုအရှိန်ကြောင့် အေးနေပါလျက် သူနွေးလာခဲ့တယ်။
ဘာဆိုဘာမှ ရှိမနေချိန်တွေတိုင်းဟာ ချိုမြမြဲဖြစ်တယ်။ ချိုမြခြင်းအဟုန်ဟာ ချမ်းမြေ့မှုအဖြစ် ကူးပြောင်းတယ်။ မြေ့နေတဲ့ အေးမြမှုဟာလည်း ခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးကို အနွေးထွေးဆုံး လွှမ်းခြုံထားနိုင်တယ်။ သူ့ကို ပွေ့ထွေးထားတဲ့ အဲ့ဒီ အဲ့ဒီအရာတွေဟာ တစ်ခဏလေးအတွင်း တစ်ဖျတ်ဖျတ် လင်းလက်နေကြတယ်။
အကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့ ထုထည်ခိုင်မာတဲ့ နေရာတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ဖို့-- တဲ့။ အဲ့သလို တီးတိုးဆိုရင်း လွတ်လပ်နေတဲ့ သူ့စိတ်ကို အသာတကြည် အတောင်ပံ တပ်ပေးလိုက်တယ်။
အသိပါသော ထိုထို ခဏပေါင်းများစွာတို့ သိန်းသန်းချီကာ ဝဲပျံ လွတ်မြောက်ပါစေသား...။ ။
( 2014/ 12/ 26 )
■■■■■■■■■ Untitled_4 ::: ★彡
သူ ရှိနေတယ်- မမြဲခြင်းတရား ဆိုတာကြီးအောက်မှာ ခုတိုင်ထိတော့ ရှိမြဲရှိနေသေးတာ.. တဲ့။
ဂဏန်း အမှတ်စဉ်တွေ ပြောင်းသွားတယ်။ လူသား မျိုးဆက်တွေ ပြောင်း သွားတယ်။ ခေတ်အခါကြီးရဲ့ ရေစီးကြောင်းတွေ တစ်လိမ့်လိမ့် ပြောင်းသွားတယ်။ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းတွေ ခန့်ငြား ထည်ဝါလာသယောင် ပြောင်းသွားတယ်။ ခန္ဓာသဏ္ဌာန် မတူတဲ့ သတ္တဝါတွေ သေဆုံးခြင်း အမျိုးမျိုးနဲ့ သေသွားကြတယ်။ အချို့တွေ နာမ်တူ၊ ရုပ်ကွဲ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပြန်ဖြစ် လာတတ်ကြသေးတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အပြောအရ ပြောရရင် “ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်၊ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်ကြီး ပေါ့ဗျာ--” တဲ့။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် အတိုင်းပဲ။ ပူပြင်းလာချိန် ကျွန်တော့် “နွေ” တဲ့။ ရွှဲရွှဲစို စိုစွတ်လာချိန်ကျ ကျွန်တော့် “မိုး” တဲ့။ အဲ-- ဖွေးဖွေးဖြူ နှင်းတွေကျပြန်တော့ ကျွန်တော့် “ဆောင်း” ဆိုပဲ။ ရာသီတွေ ခွဲချ၊ စကားလုံးတွေ ပြောင်းပြီး ကျွန်တော့်ကို ကင်ပွန်းတပ်ကြတာ ခင်ဗျားတို့ မဟုတ်လား..! တကယ်က ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော် ရှိနေတာမဟုတ်လားဗျာ--- တဲ့။ ပြောပြောဆိုဆို အသံဝါကြီးနဲ့ တဟဲဟဲ သူ ရယ်ချတယ်။
အဝေးကြီး မကြည့်စမ်းပါနဲ့ဗျာ.. ဟိုရက်လေးတွေကတင် ကျွန်တော့်ကို နှစ်၊သုည၊တစ်၊လေး ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ကြီးအောက် ထိုးထည့်ခဲ့ပြီး.. ဟော ခုကျ နှစ်၊သုည၊တစ်၊ငါး အသစ်-- အသစ်စက်စက်ကြီး-- ဆိုပြီး ခင်ဗျားတို့ ဆိုကြပြန်ရော။ ရယ်ပြီးရင်း ရယ်ရရင်း ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကြီး ပြန်မစေ့နိုင်တော့တာသာ ကြည့်--- တဲ့။
သူ့ပုံစံ ကြည့်ရတာ ခပ်ဘွင်းဘွင်းနဲ့ အရှိအတိုင်း ပြောချတတ်တဲ့ တောသားကြီးတစ်ယောက်လို ချစ်စရာကြီးရယ်။ ကျွန်မ သူ့ကို အတော်သဘောကျသွားတယ်။ စကားတွေ စပြောကာစက သူ့မျက်နှာကို နားလည်အောင် ကြိုးစားပမ်းစား လိုက်ဖတ်ခဲ့ရသူကျွန်မ.. အခု သူ စကားရပ်သွားမှာ စိုးထိတ်နေမိပြန်သေးတယ်။ သူ့ စကားသံတွေ မမောတမ်း ထပ်နားထောင်ချင်သေးတာ။
နေပါဦးရှင်-- လို့ ကျွန်မ နှုတ်က ထွက်မတားလိုက်ခင်မှာပဲ ကျွန်မအရှေ့မှာ သူရှိမနေတော့ဘူး။ သူ့ ရယ်မောသံတွေတော့ ခုထိ ကြားနေရဆဲပဲ။
“လိုက်ရှာမနေနဲ့ ခလေးမ.. မင်းဟာ ငါ့ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေပြီးသားရယ်ကွ..” --- တဲ့။
တဟားဟား သူ့ရယ်သံတွေအောက်မှာ ရင်ခုန်သံတွေ တစ်လှပ်လှပ်နဲ့ ကျွန်မမြူးပျော်သွားမိတယ်..။။
( 2015/ 01/ 02 )
■■■■■■■■■ Untitled_5 ::: ★彡
ဘာမှ မလိုချင်တာ ကိုယ်၌က အလျှံပယ် ရနေခြင်းသာဖြစ်တယ်.. လို့ ခပ်ဆဆ သူပြောလိမ့်ဥိးမယ်။
ဒီခုံတန်းလျားရှည်ပေါ် ထိုင်နေမိတာ နာရီအချို့လွင့်မျောသွားခဲ့ကြောင်း သူ သတိမမူမိခဲ့ဘူး။ တောက်ပနေတဲ့ နေရောင်တွေ ခန့်ခန့်ငြားငြား ညို့မှိုင်းလာပါမှ ဖြတ်ကနဲ သူ့အတွေးထဲ ရောက်လာတော့တာ။ မှိတ်ထားတဲ့ မျက်လုံးတွေ ဖွင့်လိုက်တာလည်း အဲ့ဒီအချိန်မှပဲပေါ့။
ခပ်လှမ်းလှမ်း ဆိုက်ပရပ့်စ်ပင်ကြီးထက်က ငှက်ငယ်တစ်သိုက် ရုတ်ချည်း ထ- ပျံသွားကြတယ်။ ဘယ်ကိုလဲ..! လို့ တစ်ကိုယ်တည်း ရေရွတ်ကြည့်ရင်း သူ့ဘာသာ တီးတိုး ဖြေမိပြန်ရဲ့။ အဖြေဟာ အခြားသူတွေအတွက် အူကြောင်ကြောင်နိုင်နေမှာ သူ သိတယ်.. ဆိုပဲ။
ပျံသွားခြင်းဟာ ပြန်သွားခြင်း မဟုတ်သလို အတူတူလည်း ဖြစ်ပြန်တယ်.. တဲ့။ ရာသီ၊ ကာလ၊ အချိန်၊ နာရီ၊ တောက်ပခြင်း၊ မှိုင်းညို့လာခြင်းတွေနဲ့ ချိန်ထိုးကြခြင်းတွေသာ။ ပြန်တယ်၊ သွားတယ်၊ လာတယ်ရယ်လို့ သတ်မှတ်ကြတာ ယဉ်ပါးမှုနဲ့ အစပြုလာတဲ့ခေတ် အဟောင်းအဆွေးကြီးတည်းက မဟုတ်လား။ တစ်စုံတစ်ယောက်သာ သူ့ကို ငေးမောကြည့်နေခဲ့ပါရင် မချိုမချဉ် ရယ်ကျဲကျဲ မျက်နှာနဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပဲ တွေ့ရလိမ့်မပေါ့။
သူကော..! ထ ပျံရမှာလား။ ထ ပြန်ရဦးမှာလား။ ပျံချင်လည်း ဖြစ်တယ်။ ပြန်ချင်လည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အမှားကြီးကို ပေကပ်ကပ်သူ ဆက်တွေးကြည့်ချင်နေသေးပေါ့။ နိုး.. မဟုတ်သေးဘူး။ တကယ်က ပြန်တာမှ ဟုတ်မနေဘဲ။ သွားနေတုန်း- ဆက် သွားနေတုန်းရယ်လို့ တွေးရင်း သူ့မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းသွားခဲ့တယ်။
အေးစိမ့်နေတဲ့ လေထုက သူ့ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကို အားမနာလျှာမကျိုး ကြည်စယ်တယ်။ စိုစွတ်စွတ် ရွက်ဟောင်းတချို့လည်း သူ့ဘေးနား နေရာလွတ်က ခုံတန်းပေါ် ပြုတ်ကျသွားပေါ့။ လေးငါးရွက်သာ အိုမင်းနေပေမယ့် ကျန်အရွက်တွေက စိမ်းလန်း လတ်ဆတ်နေတုန်း။ အနီးဆုံး သစ်တစ်ရွက်ကို ထိကိုင်ဖို့ လက်အလှမ်းမှာပဲ သူ ငြိမ်ဝပ်ကျသွားခဲ့တယ်။
ပျံတယ်ဆိုမှတော့ ရောက်မှဖြစ်တော့မယ်။ ပြန်တယ်ဆိုတာလည်း ရောက်ဖို့ပဲ။ ဒါဆို ဆိုက်ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့ တမ်းမျှော်မှုတွေ ကပ်ပါနေဦးတော့ မပေါ့။ တကယ်က ငြိမ်ငြိမ်ဆိတ်ဆိတ် ထိုင်နေရင်း ပျံခြင်းနဲ့ ပြန်ခြင်းကို တပြိုင်တည်း ရှူ ရှိုက်ပြီး သွားနေတာလို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ သူ မပြောဘဲ ချန်ထားတာဖြစ်တယ်။
ဘာမှ မလိုချင်တာ ကိုယ်၌က အလျှံပယ် ရနေခြင်းဖြစ်တယ်.. လို့ တစ်ကိုယ်စာ ကြားရုံ ခပ်ဆဆ သူရွတ်ဆိုပါလိမ့်ဥိးမယ်..။
( 2015/ 02/ 05 )
✿ ခင်လေးငယ် ✿
Posted by Khin Lay Ngel at 2/28/2015 02:24:00 AM